သားရဲ၏အမှတ်အသား 666 - ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်
ေမ ၁၉၊​ ၂၀၂၂ ေမ 3၊ 2019 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ကျွန်တော်လည်း ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးထားပါတယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏သားရဲများအကြောင်း အစောပိုင်းက ရေးသားချက်အများအပြား.
Beast 666 ၏ အမှတ်အသားကား အဘယ်နည်း။
ဤအမှတ်အသားသည် မကယ်တင်ရသေးသောလူသား၏ ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် မကယ်တင်ရသေးသောလူသားတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းတန်ခိုးဖြင့် သူတို့၏ဝိညာဉ်နှင့် ဝိညာဉ်ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းမရှိဘဲ လူများကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် သားရဲနှင့် ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်- သားရဲကဲ့သို့ နားလည်ကြပြီး သားရဲကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ နေထိုင်ကြပြီး သားရဲကဲ့သို့ ထာဝရတာဝန်ယူမှုအပေါ် သြတ္တပ္ပစိတ်မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မာရ်နတ်သည် လူတို့ကို ၎င်း၏ “အမှတ်အသား”ဖြစ်သည့် သားရဲဝိညာဉ်၏လှည့်စားသောစွမ်းအားများအောက်တွင် ထားရန် နှစ်သက်သည်။
ဗျာဒိတ် ၁၃ ၏ ပထမသားရဲသည် အဘယ်အရာကို ကိုယ်စားပြုသနည်း။
ပထမသားရဲကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသို့ ပြောင်းလဲသွားသောအခါ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ ပြိုလဲမှုအခြေအနေ. Pagan Rome သို့မဟုတ် ပထမရာစုနှစ်များ၏ ဝိညာဉ်ရေးနဂါးစွမ်းအားသည် ဤစကြာဝဠာ သို့မဟုတ် ကက်သလစ်အာဏာနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျအား ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဗျာဒိတ် ၁၃ ၏ဒုတိယသားရဲသည် အဘယ်အရာကိုကိုယ်စားပြုသနည်း။
ဒုတိယသားရဲကို ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၁-၁၅ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤသားရဲသည် သိုးသငယ်နှင့်တူသော်လည်း စာတန်၏တန်ခိုးဖြင့် စကားပြောကာ လှည့်စားခဲ့သည်။ ဤဒုတိယသားရဲသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလတွင် ကျရောက်ခဲ့သော ပြိုလဲသောအခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းခွဲများ စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကဲ့သို့ တူညီသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ကျင့်ကြံလာသောအခါ၊
ဝိညာဉ်ရေးအရ၊ ဒုတိယသားရဲသည် အမှန်တကယ်ပင် အကူးအပြောင်းသတ္တဝါဖြစ်သည်- ပထမသားရဲသည် ၎င်း၏ရုပ်ပုံတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ၎င်း၏အသက်ကို ဆက်လက်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် universal ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ၊ သားရဲ၏ရုပ်ပုံသည် universal ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သားရဲနှင့်တူသော ဤဒုတိယသိုးသငယ်သည် ဤတတိယပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သော သားရဲ၏အသက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်၏။ ပရိုတက်စတင့်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရှိ နိုင်ငံများနှင့်လူများသည် ကမ္ဘာ့ဘုရားကျောင်းများကောင်စီနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ကို အသက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် စကြာဝဠာ သို့မဟုတ် ကက်သလစ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကွယ်လွန်တဲ့အခါတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ဂါရဝပြုဖို့ ကြွလာကြတာကို သတိပြုမိဖူးပါသလား။ ကက်သလစ် ဆိုသည်မှာ စကြာဝဠာ ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် စကြဝဠာ ပါဝါနှင့် သြဇာရှိသော ပထမဆုံး သားရဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤအဖွဲ့အစည်း၏စိတ်ဝိညာဉ်သည် ၎င်း၏အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဤတူရဲသဘာဝဖြင့် အမှတ်အသားပြုလိုသည်မှာ ယုတ္တိတန်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ လူများကို စာတန်၏လှည့်စားမှုအောက်တွင် ထားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဝေးကွာစေခြင်းပင်။
“မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကား အဘယ်သူနည်း၊ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်အားဖြင့် ဖန်ဆင်းခံ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိကြကုန်သော၊ မြေကြီး၌ ရှိကုန်သော၊ မြင်နိုင်၊ မမြင်နိုင်သော၊ ပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အုပ်စိုးသည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် တန်ခိုးများဟူမူကား၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူနှင့်၎င်း ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။” ~ ကောလောသဲ ၁:၁၅-၁၆
သားရဲရုပ်တုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
စာတန်၏အလုပ်မှာ အယူဝါဒနှင့်တူသော သားရဲနှင့် မိတ်သဟာယကဲ့သို့ သားရဲဖြင့် သူတို့၏စိတ်နှင့် နှလုံးသားများကို အမှတ်အသားပြုခြင်းဖြင့် မျက်စိကန်းသူများကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတွေကို သားရဲပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အရာ။
“ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားကို ဝှက်ထားလျှင်၊ ပျောက်သောသူတို့အား ဝှက်ထားတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ မယုံကြည်သောသူတို့၏စိတ်ကို ဤလောက၏ဘုရားသခင်သည် ကန်းစေတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်ဖြစ်သော ခရစ်တော်၏ဘုန်းကြီးသော ဧဝံဂေလိတရား၏အလင်းကို စိုးရိမ်၍မရ၊ သူတို့ကို ထွန်းလင်းစေရမယ်။" ~ ၂ ကောရိန္သု ၄:၃-၄
“ထိုသူတို့သည် မသိသောအရာတို့ကို မကောင်းပြောတတ်သည်ကား၊ သဘာဝအတိုင်း သိသောအရာကို တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ ဖောက်ပြန်တတ်၏” ~ ယု ၁:၁၀
ထို့ နောက် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဤလှည့်ဖြားမှုဖြင့် လူတို့ကို အမှတ်အသားပြုရန် ဒုတိယသားရဲ၏ စွမ်းအားကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
“အသေးအဖွဲ၊ ကြီးသူ၊ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လူအပေါင်းတို့အား သူတို့၏ညာလက်၌ဖြစ်စေ၊ နဖူး၌ဖြစ်စေ အမှတ်အသားပြုစေတော်မူ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၆။
သားရဲ၏ အမှတ်အသားသည် အဘယ်ကြောင့် ညာလက် သို့မဟုတ် နဖူး၌ ရှိသနည်း။
လူတိုင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် မှားယွင်းသောယုံကြည်မှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းသောမိတ်သဟာယတစ်ခုဖြင့် အမှတ်အသားပြုကြသည်။ ယေရှုခရစ်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းတန်ခိုးအားဖြင့်သာ ဤအမှတ်အသားကို ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအမှတ်အသားကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ သားရဲ၏နိုင်ငံတော်၏ လက်အောက်ခံမဟုတ်တော့သည် (ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအချို့၏ နိုင်ငံသားဖြစ်နေကြသော်လည်း) ရုတ်တရက် တွေ့ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သားရဲ၏နိုင်ငံတော်တွင် မပါဝင်တော့သည့်အတွက်၊ သားရဲ၏နိုင်ငံတော်မှသူတို့ကို ယေရှုခရစ်၌ စစ်မှန်သောစည်းစိမ်ကိုရှာရန် ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် သားရဲကိုချစ်သောသူတို့သည်လည်း ကြိုဆိုခြင်းခံရတော့မည်မဟုတ်ပေ။
“တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ဤနက်နဲသောအရာ၏ ဘုန်းစည်းစိမ်ကား အဘယ်အရာကို ဘုရားသခင် ထင်ရှားစေတော်မူမည်နည်း။ ဘုန်းကြီးသော မြော်လင့်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌ ခရစ်တော်ရှိတော်မူ၏။” ~ ကောလောသဲ ၁:၂၇
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏သားရဲသည် ခရစ်ယာန်စစ်များကို “အဝယ်ရောင်းခြင်း” မှ တားဆီးလိုခြင်းကား အဘယ်နည်း။
စာတန်သည် လူတို့ကို သူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားလိုသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့ကို ခရစ်တော်၌ စစ်မှန်သော စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် လွတ်လပ်မှုမှ ကင်းဝေးစေရန်၊ စကြဝဠာသားရဲသည် ယေရှုခရစ်၏ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောရန်၊ စစ်မှန်သော သန့်ရှင်းသူများ၏ စွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ရန် ကြိုးစားသည်။
“အဘယ်သူမျှ မဝယ်မရောင်းရ၊ တံဆိပ်ရှိသူ သို့မဟုတ် သားရဲ၏အမည်၊ သို့မဟုတ် သူ၏အမည်နံပါတ်မှလွဲ၍ မည်သူမျှ မရောင်းရ” ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၇
ယခု နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တရားဟောဆရာတစ်ဦးသည် မည်သည့်ဂိုဏ်းဂဏအသင်းတော်တွင်မဆို တရားဟောခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒီလူကို တရားဟောဖို့ ဘုရားသခင် ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂိုဏ်းဂဏနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်ခံတရားဟောဆရာကို ဘယ်သောအခါမှ ဟောပြောခွင့်မပြုပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့၏မှားယွင်းသောအယူဝါဒများနှင့် ၎င်းတို့၏မှားယွင်းသောမိတ်သဟာယများ၏အမှတ်အသားကို ဆုံးမတော်မူမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကို နာခံပြီး အသက်ရှင်ရန် ဝိညာဉ်ကို အပြစ်မှကယ်တင်သောအခါ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် စစ်မှန်သောမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းမှာ ပထမဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပထမဆုံး မိတ်သဟာယဖွဲ့သောအခါ၊ ထို့နောက် အချင်းချင်း မိတ်သဟာယဖွဲ့နိုင်ကြသည်။
“ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့၍ မှောင်မိုက်၌ ကျင်လည်ကြလျှင်၊ ငါတို့သည် မုသာဝါဒကို မကျင့်၊ အလင်း၌ ကျင်လည်ကြလျှင်၊ သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို အပြစ်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေတော်မူ၏။” ~ ၁ ယော ၁:၆-၇
တရားဟောဆရာဟု ခေါ်သော စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မှ လွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ ဟောပြောလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှုကိုသာ အခြေခံ၍ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို သားရဲ၏ အမှတ်အသားပြုသူတို့သည် မည်သည့်အခါမျှ လက်ခံမည်မဟုတ်ပေ။
“အဘယ်သူမျှ မဝယ်မရောင်းစေခြင်းငှါ၊ အမှတ်အသားရှိသူ၊ သားရဲအမည်၊ နံမည်မှတပါး၊ ဒီမှာ ပညာရှိတယ်။ ဥာဏ်ရှိသောသူသည် သားရဲအရေအတွက်ကို ရေတွက်စေ။ သူ့နံပါတ်က ခြောက်ရာ ခြောက်ဆယ်ခြောက်” ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၇-၁၈
အခုပြောပြီးသား အမှတ်အသား။ သားရဲ၏အမည် (သို့မဟုတ် ဝိသေသလက္ခဏာ) သည် ရိုမန်ကက်သလစ် (စကြာဝဠာ) ဘုရားကျောင်းကို စော်ကားခြင်း သို့မဟုတ် မလေးစားခြင်း၏ အမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဖော်ပြထားသည်– “သူ၏နာမတော်အရေအတွက်” ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
သားရဲနှင့်ပတ်သက်၍ ဗျာဒိတ်ကျမ်းက အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဆိုသနည်း– ““သူ၏နာမတော်အရေအတွက်”
လူများစာရင်းသွင်းထားသည့် မတူညီသောအယူဝါဒများနှင့် မိတ်သဟာယများပါဝင်သည်ဟု အချို့ကပြောကြသည်။ မုချပြောတာပဲ။ (ခရစ်တော်နှင့် သူ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် သင့်ကိုယ်သင် နှိမ့်ချခြင်းမပြုပါက၊ သင့်အတွက် အခြားဘာသာရေးလက္ခဏာကို သေချာပေါက်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။) သို့သော် သခင်ဘုရားသည် သားရဲ၏အမည်အရေအတွက်ကို နားလည်စေလိုသည့်တိုင် နက်နဲသောအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိပါသည်။ လူများကို လှည့်စားခံရစေသည့် အရင်းခံစိတ်သဘောထားကို နားလည်ရန်နှင့် ထိုအမှတ်အသားဖြင့် အမှတ်အသားပြုရန် ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်။ ဒါကြောင့် သူက အဲဒီအမှတ်အသားရဲ့ နံပါတ်က 666 ကို ပြောပြတယ်။
သားရဲ၏နံပါတ်သည် အဘယ်ကြောင့် 666 နှင့်ညီမျှသနည်း။
သခင်သည် နံပါတ် 666 ကိုရွေးချယ်ရခြင်းအတွက် အလွန်တိကျသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် သားရဲ၏နံပါတ်နှင့် လူအရေအတွက် နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသည်။ ၎င်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးတွင် လူကို သားရဲနှင့်တန်းတူဖြစ်စေကာ သူ၏မိတ်သဟာယတွင် သားရဲနှင့် တန်းတူဖြစ်စေသော အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤသားရဲအမှတ်အသားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် “ခရစ်ယာန်” ဟုဆိုကြသော လူများနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတွင် “မြေကြီး၊ ကာမဂုဏ်၊ ယုတ်မာသော” ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ သတ္တဝါတို့ အလိုရှိသကဲ့သို့ သတ္တဝါတို့၏ အလိုကို လိုက်၍ တပ်မက်ကုန်၏၊ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ “ခရစ်ယာန်မိတ်သဟာယ” သည် အလွန်ပင် ဇာတိပကတိ သို့မဟုတ် ဇာတိပကတိဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
လူ = သားရဲ = ၆၆၆ (ဆာလံ ၄၉:၂၀ ကိုကြည့်ပါ)
သားရဲ၏အမှတ်အသားအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသော ကျမ်းချက်များကို ထပ်ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့။
ညာလက်၌ သားရဲ၏ အမှတ်အသားကား အဘယ်နည်း။
“တိုင်များဖြစ်ဟန်တူသော ယာကုပ်၊ ကေဖ၊ ယောဟန်တို့သည် ငါ့အားပေးတော်မူသော ကျေးဇူးကို သိမြင်သောအခါ၊ ဗာနဗနှင့် ဗာနဗကို ပေးကြ၏။ မိတ်သဟာယလက်ျာ; ငါတို့သည် တပါးအမျိုးသားတို့ထံသို့ သွား၍ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံစေခြင်းငှါ၊ ~ ဂလာတိ ၂:၉
ထို့ကြောင့် လက်ျာလက်၌ရှိသော သားရဲ၏ အမှတ်အသားသည် ဘုရားနှင့်တူသော မိဿဟာယ အစား သားရဲ၏ အမှတ်အသား ဖြစ်၏။
နဖူးမှာ သားရဲရဲ့ အမှတ်အသားက ဘာလဲ။
နဖူးပေါ်ရှိ အမှတ်အသားသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် နားလည်မှုတွင် အမှတ်အသားပြုထားကြောင်း ပြသသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ မဆင်ခြင်ဘဲ၊ သူတို့တွင် ခရစ်တော်၏ စိတ်သဘောထား မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သားရဲနှင့်တူသော ဇာတိပကတိအတိုင်း တွေးတောဆင်ခြင်ကြသည်။
“ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​၏​စိတ်​တော်​ကို အ​ဘယ်​သူ​သိ​သ​နည်း။ ငါတို့မူကား ခရစ်တော်၏စိတ်သဘောရှိကြ၏။" ~ ၁ ကောရိန္သု ၂:၁၆
သို့သော် ဤအမှတ်အသားကို အပြည့်အဝနားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗာဗုလုန်ဘုရင်များ၏ စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျမ်းချက်များကို စစ်ဆေးရုံသာမက ရှေးဗာဗုလုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှေးသမိုင်းကြောင်းကိုပါ ဆန်းစစ်ရန် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုအချိန်က လူများကို ချုပ်ကိုင်ထားသော စာတန်၏ လှည့်စားသော စိတ်ဓာတ်သည် ယနေ့ လူများကို လှည့်စားသည့် တစ်ခုတည်းသော ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် သခင်ဘုရားသည် ဤဗာဗုလုန်၏ဝိညာဉ်ကို အနိုင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး လူတို့ကို အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ရန် စာတန်၏လှည့်ဖြားမှု၏ အဓိကစိတ်ဓာတ်အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။
ဗာဗုလုန်သည် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လူတို့သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်ရှိရန် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရဲတိုက် (ကမ္ဘာဦး ၁၁) ကို စတင်တည်ဆောက်ပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဥ်ဝိသေသလက္ခဏာကို ဖန်တီးကြသောအခါတွင် ဓမ္မဟောင်းဟူသောအမည်သည် အစောပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ (ယနေ့ခေတ်တွင် ဗာဗုလုန်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟူသည်မှာ တစ်ချိန်က ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းခဲ့သော လူသားသည် ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုခြင်းနည်းလမ်းကို ဖန်တီးရန် ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။) သို့သော် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားနှင့် သဘောတူနိုင်စွမ်းကို ရှုပ်ထွေးစေသောကြောင့် သူတို့၏ရဲတိုက်ကို တည်ဆောက်ခြင်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ လူများ ကွဲပြားသွားကြသည်။ ယနေ့လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်- ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်များကို တည်ဆောက်နေကြသော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများကို တစ်ဖန်စေလွှတ်ခဲ့ပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အား အကြိမ်ကြိမ်ခွဲဝေပေးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဤဝိညာဏနံပါတ် 666 ၏အဓိပ္ပါယ်ကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
666 သည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ နံပါတ်ဖြစ်ပါသလား။
၀ိညာဉ်ရေးရာဂဏန်းအဖြစ်၊ ပကတိကိန်းဂဏန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ၊ 666 သည် "ချိန်တွယ်ပြီး လိုချင်တပ်မက်မှု" ဖြစ်သည့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်ကို ချိန်ခွင်လျှာဖြင့် ချိန်ဆသောအခါ ယင်းသည် တိုတောင်းသောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအမှတ်အသားရှိသောလူများသည် ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အပြည့်အဝ မတိုင်းတာကြပါ။
သင့်အပြစ်များအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပြီးသောအခါတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောပုံသဏ္ဌာန်သည် ယေရှုခရစ်အတွက် စိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးနှင့် အသက်တာကို အပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ မြင့်မြတ်သော သဘာဝကို ရရှိလိမ့်မည်။
စစ်မှန်သောဘုရားသခင့်သဘာဝတရားသည် အတွင်း၌ အုပ်စိုးနေသဖြင့်၊ သားရဲအရေအတွက်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်သောဝိညာဉ်ဉာဏ်ပညာရှိလိမ့်မည်။ ပညာမရှိသော သူသည် လူနှင့် နှိုင်းယှဥ်၍ ဉာဏ်ပညာကို နှိုင်းယှဥ်၍ သူတို့၏ ဝိညာဉ်အသက်တာ ကို ချိန်တွယ်သော သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်များသည် ဤလှည့်စားသောဉာဏ်ပညာကို အားကိုးသူအရေအတွက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် သတိပေးထားသည်။
"အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် မိမိကိုယ်ကို ချီးမြှောက်သောသူတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ကိန်းအောင်းခြင်းမပြုဝံ့ဘဲ၊ သူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကို တိုင်းတာ၍ အချင်းချင်း နှိုင်းယှဥ်ကြသော်လည်း ပညာမရှိကြ။" ~ ၂ ကော ၁၀:၁၂
သားရဲသဘာဝရှိသူများသည် မိမိတို့ကိုယ်ကို အခြားသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးအား ချိန်ဆကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောသူတို့မူကား၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ချိန်ဆကြသည်။ ယင်းက သင့်အား ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ သင်၏ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ တိကျသောမှတ်တမ်းတစ်ခု ပေးလိမ့်မည်။
“သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား ဘော်ပြတော်မူပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို စစ်ကြောတော်မူ၍၊ အကြောင်းမူကား၊ လူ၏အကြောင်းအရာကို အဘယ်သို့သိသနည်း။ သို့​ရာ​တွင်​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​အ​မှု​တို့​ကို အ​ဘယ်​သူ​မျှ​မသိ​ဘဲ၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဝိ​ညာဉ်​တော်​မှ​တပါး​အ​ဘယ်​သူ​မျှ​မသိ။" ~ ၁ ကောရိန္သု ၂:၁၀-၁၁
ဘုရားသခင်သည် တောင်ကုန်းများကို ချိန်ခွင်နှင့် ချိန်ခွင်လျှာဖြင့် တိုင်းတာသည် (ဟေရှာယ ၄၀:၁၂ ကိုကြည့်ပါ)။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၏ ချိန်ခွင်လျှာကို ချိန်ခွင်လျှာဖြင့် ချိန်ခွင်လျှာဖြင့် ဘာသာတရား၏ တောင်ကုန်းများကို တိုင်းတာသည်။
ထိုချိန်ခွင်များတွင်လည်း လူတစ်ဦးချင်းစီကို ချိန်ဆသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်၊ ဗာဗုလုန်ဘုရင် ဗေလရှာဇာသည် ဘုရားသခင်၏ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၏ တန်ဆာများကို ယူ၍ ၎င်း၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး ဘုရားတရားမဲ့သော ရုပ်တုကိုးကွယ်သည့် ပါတီ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တွေးဆသောအခါ၊ နံရံပေါ်ရှိ လက်ရေးက သူ၏ နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ လာ။
“စပျစ်ရည်သောက်၍ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ သံ၊ သစ်သား၊ ကျောက်ဘုရားတို့ကို ချီးမွမ်းကြ၏။ ထိုနာရီတွင် လူ၏လက်ချောင်းများထွက်လာ၍ နန်းတော်ထရံအင်္ဂတေပေါ်တွင် ဆီမီးခုံပေါ်၌ ရေးမှတ်သဖြင့် ရေးထားသော လက်တစ်ပိုင်းကို ရှင်ဘုရင်မြင်လေ၏။ ~ ဒံယေလ ၅:၄-၅
ပရောဖက်ဒံယေလသည် ဗာဗုလုန်အပေါ် စီရင်ချက်ချမည်ဟု ဆက်လက်ပြောခဲ့သည်။ ဗာဗုလုန်၏ဖခင် နေဗုခဒ်နေဇာသည် သားရဲတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် စီရင်ချက်သည် အတည်ဖြစ်သည်။ (ဒံယေလ အခန်းကြီး ၄ တွင် သူသည် သားရဲအဖြစ် အမှန်ပင် အမှတ်အသားပြုခံရသည်။) ဘုရင်ဗေလရှာဇာသည် သူ့ခမည်းတော်ထံ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို သိရှိခဲ့သည်။
ဒံယေလ အခန်းကြီးလေးတွင် နေဗုခဒ်နေဇာသည် သူ၏စိတ်ပျက်ကာ သားရဲကဲ့သို့ဖြစ်လာကာ သူ၏မာနကြောင့် သားရဲကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ရန် ဘုရားသခင်က နှိမ့်ချခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်သည် နေဗုခဒ်နေဇာကို သနားတော်မူသည်။ ဘု​ရင်​သည်​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည် မြေ​ကြီး​ပေါ်​ရှိ​ဘု​ရင်​အ​ပေါင်း​တို့​ကို​အုပ်​စိုး​တော်​မူ​ကြောင်း ဝန်​ခံ​တော်​မူ​၏။
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ့ဖခင်ကိုပြသခဲ့သည့်အရာကို ဗေလရှာဇာသိသော်လည်း အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အပေါ် လုံးလုံးလျားလျား မလေးစားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယခု ဒံယေလသည် ထိုကဲ့သို့ မရိုသေခြင်းအတွက် သူ၏နောက်ဆုံး ဆုံးပါးခြင်းဘေးကို ဗေလရှာဇာအား ပြောပြခဲ့သည်။ ဗာဗုလုန်နိုင်ငံကို ရေတွက်ပြီးပြီ။ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း – ၆၆၆ တွင်လည်း ရေတွက်ထားသည်ကို သတိပြုပါ။) ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ရဲ့ ချိန်ခွင်နဲ့ ချိန်တွယ်ပြီး ချို့တဲ့စွာနဲ့ တက်လာခဲ့တယ်။
“ဤကား၊ MENE၊ MENE၊ TEKEL၊ UPHARSIN ရေးခဲ့သောစာဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် MENE ; ဘုရားသခင်ရှိတော်မူ၏။ သင်၏နိုင်ငံကို ရေတွက်၍၊ပြီးသွားတယ်။ TEKEL ; သင်သည် ချိန်ခွင်လျှာ၌ ချိန်တွယ်၍ လိုချင်တပ်မက်မှုကို တွေ့ရှိရသည်။ PERES ; သင်၏နိုင်ငံကို ပိုင်းခြား၍၊ ~ ဒံယေလ ၅:၂၅-၂၈
မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ် ၁၆ တွင် နောက်ပိုင်းတွင်၊ ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်သည် သူမအား ဘုရားသခင်တရားစီရင်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သုံးပိုင်းခွဲထားသည်။
သားရဲစိတ်ထားရှိသော ဘာသာတရား၏ အတွေးအမြင်အားဖြင့်၊ ယခု လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို လူသား၏ သားရဲပုံသဏ္ဍာန်အထိ လျှော့ချရန် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ခေါင်းမာသော ဤသားရဲသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သည့်နည်းလမ်းအတွက် ကရုဏာမရှိပါ။
ပထမသားရဲ - ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာ
ဒုတိယသားရဲ - ပရိုတက်စတင့်
တတိယသားရဲ (သားရဲ၏ပုံ) - ကမ္ဘာ့ကောင်စီအသင်းတော်များ/ ကုလသမဂ္ဂ
ဤသားရဲသုံးကောင်ကြောင့် လူသားသည် နောက်ဆုံးအကြိမ် ဘုရားသခင်ကို နှိုးဆော်ခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်သည် လူသား (ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ဆောင်သူဟု ဆိုသူ အပါအဝင်) ဘုရားသခင်၏ အထောက်အထားနှင့် သူ၏အလုပ်ကို ၎င်းတို့၏ နားလည်မှု သေးငယ်သော သေတ္တာထဲသို့ ချုပ်ချယ်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းမှ ရပ်စဲရန် ယနေ့အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအစား ဝန်ကြီးတစ်ဦးသည် လူကဲ့သို့ သားရဲ၏ အရေအတွက်၊ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ရေတွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံမှုကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန် မကြိုးစားပါနှင့်၊ သူမည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရသည်ကို မပြောဝံ့ပါနှင့်။
“ဒီမှာ ပညာရှိတယ်။ ဥာဏ်ရှိသောသူသည် သားရဲအရေအတွက်ကို ရေတွက်စေ။ သူ့နံပါတ်က ခြောက်ရာ ခြောက်ဆယ်ခြောက်” ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၈
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကွယ်မှုပုံစံကိုလည်းကောင်း၊ မည်သည့်ခေါင်းဆောင်ကိုမျှ မကိုးကွယ်စေနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ပါ” ဟု ထပ်ခါတလဲလဲ သတိပေးထားသည်။ မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာသာတရားစနစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးကို ကိုးကွယ်နေသောကြောင့် သားရဲ၏အမှတ်အသားဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ယောဟန်သည် လူ့ကောင်းကင်တမန်/တမန်တစ်ဦးကို ကိုးကွယ်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက် ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှသတိပေးချက်မှာ-
“…မလုပ်ပါနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီး၊ သင်၏ညီအစ်ကို ပရောဖက်များ၊ ဤစာအုပ်ပါစကားများကို စောင့်ရှောက်သူများထဲမှ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ပါ။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၂:၉
ဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို မနာခံမီ ဘာသာရေးစံနစ်ကို နာခံသောအခါ၊ သင်သည် ထိုစနစ်ကို ကိုးကွယ်နေပါသည်။ သင်သည် သားရဲ သို့မဟုတ် သူ၏ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်နေ၏။ ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ထက် လူကို နာခံပြီး လိုက်နာသောအခါ၊ သင်သည် သားရဲကို ကိုးကွယ်နေပါသည်။
လူတွေကို Beast က ဘယ်လို အမှတ်အသားပြုသလဲ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် သားရဲ၏ အမှတ်အသားကို ရရှိသည်။ သာလျှင် သားရဲ သို့မဟုတ် သူ၏ရုပ်တုကို “ကိုးကွယ်” ပြီးနောက်၊
“အကြင်သူသည် သားရဲနှင့် သူ၏ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်၍ အမှတ်အသားပြုလျှင်၊ . . ~ ဗျာဒိတ် ၁၄:၉
“ . . သားရဲနှင့် သူ၏ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်သောသူ၊ . . ~ ဗျာဒိတ် ၁၄:၁၁
” . သားရဲ၏အမှတ်အသားနှင့် သူ၏ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်သောသူတို့အပေါ်၌ တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၂
” . . သားရဲ၏အမှတ်အသားကို ခံရသောသူ၊ သူ၏ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်သောသူ၊ . ” ~ ဗျာဒိတ် ၁၉:၂၀
” . . သားရဲ၏ရုပ်တုကို မကိုးကွယ်၊ အမှတ်အသားကိုလည်း မခံရ။ . ” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၄
“ခရစ်ယာန်” ဟုခေါ်သည့်တိုင် မည်သည့်ဘာသာကိုမျှ မကိုးကွယ်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင်အတွက် ကြီးစွာသောအမှုတို့ကို ပြုခဲ့လျှင်ပင် မည်သည့်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာကိုမျှ မကိုးကွယ်ပါနှင့်။
မှတ်ချက်- ဤသတ္တမမြောက် တံပိုးမှုတ်သတင်းစကားသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအပြည့်အစုံတွင် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဤဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည်။ သားရဲဝိညာဉ်၏ အမှတ်အသားကို ၇ ခုမြောက် တံပိုးမှုတ်သတင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ မြင့်မားသောအဆင့်အမြင်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်၊ သင်သည် ““လမ်းပြမြေပုံဗျာ”
အမျိုးအစားများ ဘေဘီ, သားရဲ, မိစ္ဆာဘုရားရှိခိုးကျောင်း, မိစ္ဆာမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း, မှားယွင်းသောစီရင်ချက်များ, မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များ, မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှု, သားရဲ၏ပုံရိပ်, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၃, TrueBible Doctrine တဂ် 666, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု, လှည့်စားခြင်း။, နဖူး, ပြည့်တန်ဆာ, အရေခြုံ, ပရိုတက်စတင့်, ရိုမန်ကက်သလစ် ပို့စ်ညွှန်း